Basikety – Coupe du Président : hangotraka ny ampahefa-dalana rehetra | NewsMada
Hiditra amin’ny ampahefa-dalana anio ny “Coupe du Président”. Saika tafita hiatrika izany avokoa ireo ekipa goavana nifaninana tamin’ireo Zone Nord sy Zone Centre. Hangotraka, araka izany, ny fihaonana rehetra.
Tonga amin’ny tsontsori-mamba hisarahana. Hiditra amin’ny ampahefa-dalana, anio, ny fiadiana ny « Coupe du Président », taranja basikety, amin’ireo Zones roa, Nord any Antsiranana sy Centre any Toamasina. Fifaninanana eo ambany fiahian’ny filohan’ny Repoblika, Rajaonarimampianina Hery, ary karakarain’ny federasiona malagasy (FMBB).
Ho an’ny Zone Nord, mitarika ao amin’ny vondrona « A », ny Sporting (Diana), izay tsy mbola resy mihitsy, arahin’ny Chicago (Diana) eo amin’ny laharana faharoa. Fahatelo ny FBI (Sava) ary fahefatra kosa ny ASCP (Diana).
Eo amin’ny vondrona “B” indray, mitana ny lohany ny SBBC (Boeny) arahin’ny Cosmos (Diana) sy ny ABBS (Sava) ary ny DCA (Diana).
Ho an’ny Zone Centre indray, mitarika eo amin’ny vondrona “A” ny 3FB (Atsinanana). Mitana ny laharana faharoa manaraka azy ny Lucadro (Analamanga) arahin’ny AMBB (Analamanga) sy AS Fanalamanga (Alaotra Mangoro), eo amin’ny laharana fahatelo sy fahefatra.
Eo amin’ny vondrona « B », mitana ny lohany ny Challenger (Analamanga) arahin’ny AS St-Pierre (Alaotra Mangoro) sy ny Ascut II (Atsinanana) ary ny Ankarana (Analamanga).
Sporting (Diana) # DCA (Diana)
Cosmos (Diana) # FBI (Sava)
SBBC (Boeny) # ASCP (Diana)
Chicago (Diana) # ABBS (Sava)
Challenger (Analamanga) # AS Fanalamanga (Alaotra Mangoro)
AMBB (Analamanga) # AS St-Pierre (Alaotra Mangoro)
3FB (Atsinanana) # Ankarana (Analamanga)
Ascut II (Atsinanana) # Lucadro (Analamanga)